Barnyar Barnyar - Page2of 89 - News & Entertainment
တောက်ပတဲ့ အနာဂါတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ရင် ကြုံလာသမျှ အခက်အခဲတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပါ…
June 25, 2022 thanzin laypyay 0
တောက်ပတဲ့ အနာဂါတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ရင် ကြုံလာသမျှ အခက်အခဲတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပါ… ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ကမာကောင်မွေးသူတစ်ယောက်ဟာ အလှဆုံး အကြီးဆုံး ပုလဲတစ်လုံး ပျိုးဖို့ စိတ်ကူးလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် သူဟာ ပင်လယ်ကမ်းစပ်သွားပြီး သဲရွေးခဲ့တယ်။ သဲတစ်ပွင့် ရွေးတိုင်း သဲတွေကို ပုလဲဖြစ်ချင်၊ မဖြစ်ချင် သူမေးခဲ့တယ်။ အမေးခံရတဲ့ သဲတိုင်းက […]
လူတခြို့ရဲ့ ဝမျးနညျးကွကှေဲခွငျးက ကိုယျဆုံးရှုံးသှားလို့ မဟုတျဘူး၊ တခွားသူ ရသှားလို့…
လူတခြို့ရဲ့ ဝမျးနညျးကွကှေဲခွငျးက ကိုယျဆုံးရှုံးသှားလို့ မဟုတျဘူး၊ တခွားသူ ရသှားလို့… တခါက သူဌေးသူကွှယျကွီးတဦးဟာ အရှယျနှောငျးမှ သားတယောကျရလာခဲ့တယျ။ အဲဒီသားဟာ မငိုတတျဘဲ ရယျပဲ-ရယျတတျပါတယျ။ သူကွှယျကွီးက သူ့ကလေးဟာ တခွားကလေးတှလေိုပဲ ဘာထူးခွားမှုမှ မရှိဘူးဆိုတာကို သကျသပွေနိုငျအောငျ နညျးမြိုးစုံသုံးပွီး သားကို ငိုအောငျလုပျဖို့ အကွံထုတျနခေဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီ့အခြိနျမှာပဲ တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျ […]
မှီခိုဆိုပြီး အထင်သေးခံနေရသော အိမ်ထောင်ရှင်မများ
မှီခိုဆိုပြီး အထင်သေးခံနေရသော အိမ်ထောင်ရှင်မများ စိတ်ပညာရှင် ဆရာဝန်ထံသို့ လူတယောက် ရောက်လာသည်။ … “ထိုင်ပါ ကော်ဖီ သောက်မလား” “မသောက်တော့ပါဘူး သောက်လာပြီးပြီ”… “ဒါဆို ခဏလေး ကျွန်တော် ကော်ဖီ ဖျော်လိုက်ဦးမယ်” ဆရာဝန်က ကော်ဖီခွက်ကို ကိုင်လာပြီး သူ့ရှေ့တွင် ပြန်ထိုင်လိုက်သည်။ “ကဲပြောပါ ကျွန်တော် […]
သင့်ရဲ့ မျှဝေမှု သေးသေးလေးဟာ တခြားသူအမြောက်အများကို အမြင်ကျယ် လာစေနိုင်ပါတယ်
June 24, 2022 thanzin laypyay 0
သင့်ရဲ့ မျှဝေမှု သေးသေးလေးဟာ တခြားသူအမြောက်အများကို အမြင်ကျယ် လာစေနိုင်ပါတယ် ဆင်းရဲသားတစ်ယောက်က ဘုရားရှင်ကိုမေးတာ “ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်မျိုးဟာ မွဲတေဆင်းရဲ နေရတာလည်းဘုရား” ဘုရားရှင်က ပြောပါတယ်။ သင်ဟာ ” ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ ပေးကမ်းနည်းကို မသိလို့ပါပဲ။ ဆင်းရဲသားက ပြန်ပြောတာ ကျွန်တော်မျိုး”မှာ ပေးကမ်းစရာ ဘာမှမှ မရှိတာ… […]
မာရာဒိုနာသေဆုံးမှုအတွက် ဆရာဝန်တွေနဲ့သူနာပြုတွေကို တရားဆွဲမည်
June 24, 2022 linn htet 0
မာရာဒိုနာသေဆုံးမှုအတွက် ဆရာဝန်တွေနဲ့သူနာပြုတွေကို တရားဆွဲမည် ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလက သေဆုံးခဲ့တဲ့ အာဂျင်တီးနားဘောလုံးဂန္ထဝင် ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာ သေဆုံးမှုအတွက် ရာဇဝတ်မှုပေါ့ဆမှုဖြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်း ရှစ်ဦးကို ရုံးတင်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် တရားရုံးစီရင်ချက်အရ သိရသည်။ မာရာဒိုနာ က အိမ်မှာ ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူနေစဉ်အတွင်း ဆေးဝန်ထမ်းတွေက ပစ်ထားကြလို့ သေဆုံးခဲ့ရတာလို့ […]
ရွှေတောင်ကြီးနှင့် အလားသဏ္ဍန်တူသော ” မိဘ အရိပ် “
ရွှေတောင်ကြီးနှင့် အလားသဏ္ဍန်တူသော ” မိဘ အရိပ် ” အရွယ်ရောက်ပြီး-လူတယောက် အလုပ်လက်ကြော မတင်းပဲ စိတ်သန့်သန့်နဲ့ ထမင်းစားခွင့် ရှိတာ မိဘအိမ် တစ်အိမ်ပဲရှိတယ်…… အရွယ်ရောက်ပြီး… လူတယောက် ကြိုက်တဲ့ချိန် အိပ် ကြိုက်တဲ့ချိန် ထ ကာလနဂါးကြီး လုပ်ခွင့် ဖြစ်ခွင့်ရတာ မိဘအိမ် တစ်အိမ်ပဲရှိတယ်…… […]
မိဘများက သားသမီးများကို ပြုစုပျိုးထောင်ရာမှာ ဘယ်အရာတွေကို သတိထားသင့်သလဲ
June 23, 2022 linn htet 0
မိဘများက သားသမီးများကို ပြုစုပျိုးထောင်ရာမှာ ဘယ်အရာတွေကို သတိထားသင့်သလဲ “သားသမီးချင်းတူတူ ငါ့သမီး/ သားလေး ဘက်လိုက်ဆက်ဆံသလိုဖြစ်တတ်တာ” ဘက်လိုက်တတ်တဲ့ မိဘတွေရဲ့ သားသမီးတွေဟာ မစည်းလုံးကြတာများတယ်… မိဘကသွေးခွဲထားလို့ပါ `နင်ကညံ့တယ် နင်ကတော်တယ်´ဆိုပြီးကွာလတီခွဲလိုက်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာ ဘယ်တော့မှ ဈေးနှုန်းညှိမရကြတော့ဘူး… ဘက်လိုက်မှုက မလေးစားမှုကို အစပျိုးပါတယ် အချင်းချင်းမနာလိုစိတ်ကနေ အမုန်းတရားပွားများလာတယ်… ကလေးဘဝကတည်းက […]
လူ့ဘ၀ဆိုတာ ခဏလေးရယ်ပါ… အသက် ၁၅ ကနေ ၂၅ ဆိုတာက…. မာန်တွေ တက်တဲ့အရွယ်… ငါကြိုးစားရင် ဘာမဆိုဖြစ်ရမည်.. ကောင်းကင်တမွတ် ကြယ်ကိုဆွတ်မည်.. ဘာညာ ဘာညာ …။. ၂၅ ကနေ ၃၅လောက်ကျ… စွန်း ဆရာလုပ်တဲ့အရွယ်.. ဒီမှာ ငါ့ညီ.. ဒါက ဒီလိုရှိတယ်… […]
ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး နှလုံးရောဂါအတွက်ကောင်းတဲ့ ပုန်းရည်ကြီး
June 22, 2022 linn htet 0
ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး နှလုံးရောဂါအတွက်ကောင်းတဲ့ ပုန်းရည်ကြီး ပုန်းရည်ကြီးဟာ ရှေးယခင်ကနေခုချိန်ထိ အချိန်အတော်အကြာ တည်ရှိနေတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာအစားအစာတမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ပုန်းရည်ကြီးဟာ အချဉ်ဖောက်ထားတဲ့ ပဲအနှစ်တမျိုးဖြစ်ပြီး လူကြီးကလေးအားလုံးနီးပါး ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ပုန်းရည်ကြီးကို ဆီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီတွေနဲ့ သုပ်စားကြသလို ဝက်သား၊ ငါးကြီးသား စတာတွေနဲ့ ရောပြီးလည်း ချက်စားကြပါတယ်။ […]
လေဖြတ်ဝေဒနာသည်များ နဂိုအကောင်းအတိုင်း ပြန်ဖြစ်စေနိုင်သော အဖိုးတန်ဆေးနည်း လေဖြတ်ရောဂါအတွက် ဆိပ်ဖူးပင် ယခုပုံထဲမှာ မြင်နေရတဲ့အပင်ကတော့ ဆိပ်ဖူးပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိပ်ဖူးပင်ဟာ ဆေးဖက်ဝင်သည့် အပင်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးများမှာလည်း ဆိပ်ဖူးကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုထားကြပါတယ်။ အချိုပင်နှင့် အချဉ်ပင် နှစ်မျိုးစလုံးဟာ ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။ ဆေးသုံးစွဲနည်း ၁… ဆိပ်ဖူးပင်၏ […]
Visit Today : 1891
This Year : 54591
Total Visit : 54591
Hits Today : 9040
Total Hits : 318748